Kuusaa suuraa keessaa:kun baqattoota Soomalee Xaliyaana magaalaa Maaltaatti naannoo Lampeduusaatti afaan balaatii baasan.
Akka dhaabii Tokkummaa Mootummootaa ka baqataa qarqaaru UNHCR jedhutti bidiruun baqatee baattee deemtu ka guyyaa sadiin duratti garba Mediteraaniyaan keessatti galteen nama 245 du’aa fi jireenna isaanii hin beenne dhumachuu hin oolan.
UNHCR,dhaaba isa waliin hojjatu (IMC, International Medical Corps) dhaabi gargaarsa qorsa addunyaa maqeeffatee akka jedhetti bidiruun tun Sanbata guddaa darii garba Liibyaa irratti gara galtee achi keessaa nama 163 dhaban.
Hojjattootii daarii biyya Liibiyaa irra hojjatan dubartii tokkoo fi dhiira jaha balaa sun irraa barbaarsan.
Bidiruun laastikii irraa hojjatanii nama kurnya hedduu itti fahanii garba Mediteraaniyaan irraan deemanilleen Jimaata dabre gara galete nama 82 du’aa fi jireennallee dhaban.
Akka oduu UNHCR irraa arganneetti ganna kana qofa nama 1,300 deemmaa du’aa fi jireenna ta bidiruu rereeqqiftu mukaa fi laastikii irraa hojjatanitti nama tuulanii garba irraan nama qaxxaamuran bisaan keessatti gara galtuun dhume.